Qeybta:Aaladda9 min akhris
Haddii aad waydiiso saynisyahanka cimilada Katharine Hayhoe, isbeddelka cimiladu maaha kaliya dhibka orsada dacallada ah ama jiilalka mustaqbalka - way ina wada saamaysaa, halkan iyo hadda. Taas oo keliya ma aha, laakiin doorashada aan maanta sameyno waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa mustaqbalkeenna - dhammaanteenna waxaan leenahay door aan ku ciyaarno. Nasiib wanaag, ayay tidhi, dhammaanteen uma baahnin inaan noqono saynisyahano cimilada. Laakiin waxaan u baahanahay inaan si raaxo leh uga hadalno cimilada.
Sideen horumar uga samaynaa cimilada marka aynu u muuqano in aynu kala qaybsanayno, anagoo isu aragno cadawga intii aan la wadaagi lahayn dadka kale? Waxay ku dhammaatay in aan ku heshiinno wax badan oo ka badan inta aan moodeyno. Furaha ayaa ah in la yeesho wada sheekeysi sax ah si loo dhiso buundooyinka halkii laga qodi lahaa dhufeysyo.
Madaxwaynaha McKnight Tonya Allen ayaa dhexdhexaadiyay a Westminster Town Hall Forum iyada iyo Katharine Hayhoe oo ku saabsan sida aan si wax ku ool ah ula xiriiri karno dhammaan fikradaha iyo kala duwanaanshaha siyaasadeed si aan ugu dhaqaaqno irbadda isbeddelka cimilada - iyadoo waliba rajo laga qabo.
Qodobbada ugu muhiimsan ee ka soo baxay Westminster Forum, oo iyaduna qayb ka ahayd Bandhiga Waqooyiga Weyn, ayaa lagu daray hoos. Wareysiga waa la habeeyey si dheer oo hufan. Waxaad sidoo kale daawan kartaa duubista dhacdada oo buuxda.
Tonya Allen, oo madax ka ah Hay'adda McKnight Foundation, ayaa kala hadlaysa waxa ay ku qaadato in dadka loo raro ficilka cimilada Katharine Hayhoe, saynisyahanka madaxa ee Ilaalinta Dabeecadda.
Tonya: Dhageystaha Hillary Lynch waxa uu is weydiinayaa, waa ayo rasuullada ugu fiican?
Katharine: Waxaad tahay qofka ugu fiican ee wax ka qaban kara isbeddelka cimilada. Talaabada ugu horeysana waa oo ka hadlaya. Dalka Mareykanka, 70% dadka ayaa durba ka walaacsan isbedelka cimilada. 83% ee hooyooyinka ayaa walaacsan. 86% ee dhalinyarada ayaa walaacsan. Laakiin kaliya 8% oo naga mid ah ayaa hawlgeliyay oo wax ka qabanaya. Maxaa diidaya? Sababtu waxay tahay ma naqaano waxaan samayno. Ma garanayno sababta ay noloshayda halkan iyo hadda u khusayso, mana garanayno waxaan samayno si aan u saxo.
"Waxaad tahay qofka ugu fiican ee wax ka qaban kara isbeddelka cimilada. Talaabada kowaadna waa ka hadlaysa.” —KATHARINE HAYHOE, AQOONYAHAN AQOONYAHAN, XAQIIQADA DABIICIGA AH.
Minnesota gudaheeda, 64% dadku waligood kama hadlaan isbeddelka cimilada. Waxaa laga yaabaa in aan u maleyno, 'Ma ihi saynisyahan' ama 'Ma doonayo in aan dood bilaabo' ama 'ma garanayo waxa aan ka sameeyo, markaa ka hadalku waa uun niyad jab.' Laakiin waxaan kaliya ku weydiinayaa inaad ka hadasho sababta ay muhiim u tahay iyo waxa aan ka qaban karno. Maxayse taasi ku guulaysataa? Erayadaadu waxay yeelan karaan saameyn ka badan inta aad malaynayso.
Ficilku waxa ay ku bilaabmaan wada hadal, sidaas awgeedna, wada sheekaysigu waxa ay saldhig u yihiin dhammaan ficillada cimilada. Waxaan ka qaadannaa tilmaamo ku saabsan waxa muhiimka ah waxa aan ka maqalno qoyska, asxaabta, asxaabta, iyo deriska. Markaa markaan wada-hadalladan yeelanno waa tallaabada ugu horreysa ee aan qaadi karno si aan dadka uga caawinno inay fahmaan sababta ay muhiim u tahay iyo waxa aan sameyn karno si aan u hagaajinno.
Hadalku wuxuu nagu hawlgeliyaa shay amarro ka weyn raad-raaceena kaarboonka. Waxay ka hawlgelisaa annaga hooska cimilada. U doodista isbeddelka dugsigeena waxay abuurtaa saameyn aad uga weyn marka loo eego gurigayaga. U doodista isbeddelka goobta shaqada waxay yeelan kartaa saameyn boqol jeer ka weyn noloshayda gaarka ah. Kaliya maaha in aan beddelo qaab nololeedkayga gaarka ah, ee waa beddelka adduunka, beddelka nidaamka. Isbeddelku wuxuu ku bilaabmaa wada hadal maanta. Oo haddaadan ahayn rasuulkii la aaminay ee koox gaar ah, waa kuma?
"Haddii aan isugu nimaadno isbeddelka cimilada, kaas oo tobankii sano ee la soo dhaafay ahaa arrinta ugu siyaasadaysan ee Maraykanka, maxaa kale oo laga yaabaa inaan awoodno inaan isugu nimaadno?" —KATHARINE HAYHOE, AQOONYAHAN AQOONYAHAN, XAQIIQADA DABIICIGA AH.
Tonya: Waa maxay luqadda iyo habka loo baahan yahay si dhab ahaan loo xalliyo dhibaatadan?
Katharine: Maanta waa xilli aan aad ugu baahanahay in aan dhisno buundooyin, ee ma qodna godad. Haddii aan isugu nimaadno isbeddelka cimilada, oo tobankii sano ee la soo dhaafay ahaa arrinta ugu siyaasad-san ee Maraykanka, maxaa kale oo laga yaabaa in aan isugu nimaadno? Haddi aynu ku bilowno wada hadalkeena wax aynu ku heshiinay oo aynu wadaagno, ka dibna aynu ku xidhno dhibcooyinka wax aynu danaynayno, ka dibna aynu keenayno xalal wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo aynu ku guda galno si aynu u ogaano in si dhab ah loo hagaajin karo- waa marka aan wada sheekaysano yaab leh.
MAXAA LA SAMEYN karin
Tonya: Ma jiraan waxyaabo aan samaynayno oo aan faa'iido lahayn oo ay tahay in aan joojinno samaynta?
Katharine: Haa Ku daadinta xaqiiqooyin badan oo ku salaysan cabsida dadka waa wax aan faa'iido lahayn. Waxaan ognahay in xaqiiqda iyo cabsida aysan dadka dhaqaajin. Dadka intiisa badani waxay daneeyaan isbeddelka cimilada, laakiin 8% kaliya ayaa hawlgeliyay oo wax ka qabanaya. Cabsida iyo werwerku waxa ay innagu keenayaan in aynu fadhiidno, aynu is dhiibno, intii aynu tallaabo qaadi lahayn. Waxaan u baahanahay inaan wax ka qabanno labada dhibaato ee runtii dib inoo dhigaysa: Ma fahmin sida ay inoo saamayso, mana garanayno waxaan ka samayno. Sidoo kale waa in aynaan isku dayin in aynu wada hadal la bilowno 10% ee dadka aan nagu raacsanayn. Markaa cabsigelinta dadka ama diiradda saara waxa ina kala qaybinaya—waa in aan taas joojinaa.
Ugu dambeyntii, markaan aragno adduunka oo isbedelaya waxaan isku daynaa inaan xakameyno xaaladda. Waxaa laga yaabaa inaan wax ka bedelno nolosheena, laakiin markaas waxaan ku eedaynnaa ama ku ceebeynaa kuwa kale inaynaan wax badan samayn. Waa in aan xasuusannaa in aanan dooneyn in aan beddelno dadka iyo dhaqankooda, waxaan u baahanahay in aan beddelno nidaamyada ay ku tiirsan yihiin.
Tonya: Dad badan ayaa rumaysad ku riixaya. Waan ogahay inaad tahay qof dumar ah oo iimaan leh iyo inay kaa caawisay inaad timaado arrintan cimilada iyo daryeelka meeraha. Ma la wadaagi kartaa wax badan oo ku saabsan arrintaas?
Katharine: Baybalku wuxuu sheegayaa in aadanuhu ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay daryeelaan wax kasta oo meeraha - dhirta, xayawaanka, iyo aadanaha - iyo sidoo kale waxaan aaminsanahay in ay tahay in la aqoonsan yahay - in erayada Ciise - by jacaylka aan dadka kale u qabno. Sidee bay dunidu u ekaan lahayd haddii Masiixiyiinta lagu aqoonsan lahaa jacayl? Maxayse tahay guuldarada in lagu dhaqmo cimilada oo aan ahayn jacayl la'aan? Sababta aan u ahay saynisyahan cimiladu waa sababtoo ah waxaan ahay Masiixi. Kaliya diin kasta oo adduunka ugu weyn waxay leedahay caadooyin daryeelida abuurka iyo daryeelka kuwa naga nasiibka yar. Waxaa jira kooxo sida Awood iyo Iftiin Diimaha firfircoon ee Minnesota oo ka caawin kara dadka inay ku xidhaan iimaankooda iyo cimilada. Si aad u ballaadhan waxa ay ku saabsan tahay hawlgelinta quluubtayada, ma aha oo keliya madaxyadayada. Kadibna waxaan u baahanahay inaan ku xirno gacmaheena si aan u dhaqmin karno.
MAXAA RAJO KU SIINAYA?
Tonya: Mid ka mid ah daawadayaashayada, Pat Collins oo ka socda Lindstrom, MN - macalinka cilmiga nolosha fasalka 7-aad - wuxuu la yaaban yahay ardaydiisa waxa ku siinaya rajo?
Katharine: Kaligaa ma tihid. Su'aasha ugu weyn ee aan ka helayo adduunka oo dhan ayaa ah, 'Maxaa rajo ku siiya?' Waxaan u baahanahay rajo marka arrimuhu xumaadaan. Waxaan u baahanahay rajo marka ay arrimuhu ka sii dari doonaan. Waxaan u baahanahay rajo marka sida kaliya ee aan ku xaqiijin karno mustaqbal wanaagsan waa haddii aan samayno wax kasta oo aan kari karno ka dibna qaar. Rajo macquul ah ayaa tiraahda, 'waa xun, laakiin way ka sii dari kartaa, laakiin haddii aan sameyno wax walba oo aan awoodno markaas waxaan sameyn karnaa isbeddel.'
Rajadu waxay ku bilaabataa fahamka inaan wax samayn karno, in dhagaxa weyn ee ficilka cimiladu uusan ka bilaabanin buurta gunteeda iyada oo aan gacmaha la saarin. Dhagaxa weyni waxa uu ku yaalaa buurta dusheeda waxana uu durbadiiba u soo rogmanayaa buurta jihada saxda ah, kaliya kuma soconayo si ku filan. Waxa ka dhigaysa in ay dhakhso u socoto waa marka aynu gacmahayaga ku darno iyo marka aynu ku dhiirigelino kuwa kale inay ku daraan tooda. Ficilku waxa uu ina siinaya rajo—daawada rajo beelka waa ficil.
"Ficilku wuxuu na siinayaa rajo-ka-hortagga rajo-xumada waa ficil." —KATHARINE HAYHOE, AQOONYAHAN AQOONYAHAN, XAQIIQADA DABIICIGA AH.
Mid ka mid ah waxyaalihii iigu rajo weynaa waa inaan eego waxa ay dhallinyaradu qabanayaan. Waxaa jira caruur ku hawlan shaqo joojinta cimilada, laakiin sidoo kale waxaa jira caruur abuuraya tignoolajiyada si ay dabaysha iyo qorraxda ugu shubaan taleefannada gacanta, waxaa jira caruur u ololeynaya in golaha magaaladooda ay leeyihiin qorshe u adkeysiga cimilada, waxaa jira caruur dacweynaya dawladaha federaalka ee Maraykanka. , Kanada, iyo Jarmalka si ay u helaan xuquuqdooda mustaqbal wanaagsan. Waxa jira carruur heer kasta u dhaqmaya si ay isbeddel u sameeyaan, oo haddii ay samaynayaan, miyaynaan dhammaanteen samayn karin?
Tonya: Waxaad na siisaa rajo. Waxaad naga caawinaysaa inaan aragno in xallinta mashaqada cimiladu aanay ahayn cilmi oo keliya, ee ay tahay rajo, waa jacayl, waa rumaysad, waa ficil. Waxayna nagu saabsan tahay. Taasi waa waxa aad u keentay wadahadalkan. Waan wada qaban karnaa oo aan si buuxda u keeni karnaa si aan u xalino dhibaatadan. Waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo erayadaada dhiirigelinta leh iyo shaqada taasoo ka dhigaysa middaan waqti qiimo leh dhammaanteen si aan u noolaanno markaan u dhaqaaqno irbadda arrintan muhiimka ah.
Ku saabsan Katharine Hayhoe: Katharine Hayhoe waa saynisyahanka ugu weyn Dabeecadda Dabeecadda, halkaas oo ay ku kormeerto u doodista cimilada adduunka iyo shaqada la qabsiga. Waxay u adeegtay qoraa hormuud ah Qiimaynta Cimilada Qaranka Labaad, Saddexaad, iyo Afraad. Buugeeda cusub, Na Badbaadinta: Kiiska Saynisyahanka Cimilada ee Rajada iyo Bogsiinta Adduunka Kala Qaybsan, waa si dhab ah u eegis ku saabsan cilmiga isbeddelka cimilada iyo waxa laga qaban karo.